Kenya: Doorashooyinkii oo loo dareeray saaka iyo cabsida oo badan – Kasmo Newspaper
Kenya: Doorashooyinkii oo loo dareeray saaka iyo cabsida oo badan
Updated - August 8, 2017 11:42 am GMT
London (Kasmo), Dalka Kenya waxaa saaka 6dii aroornimo ee xilliga Afrikada bari la furay sanaatiiqda codbixinta, dad lagu qiyaasay 20 malyuun ayaana u dareeray in ay doortaan Madaxweynaha, Barlamaanka iyo Guddoomiyeyaasha 47ka degmo ee dalku ka koobanyahay.
Natiijadu ma ahan mid la saadaalin karo, 8da Musharrax ee la tartamaysa Madaxweynaha xilka bannaynaya Uhuru Kenyatta waxaa ugu cadcad hoggamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo 2 doorasho oo hore ku soo hugoobay.
In kasta oo Madaxweynuhu taageerada Shiinaha ku gaaray xoogaa horumar ah, dhaqaalaha dalkana uu kobcay 5%, kuma guulaysan in uu wax ka qabto shaqo la’aanta dhallinyarada oo gaaraysa 22%, waliba marka la tixgaliyo in 80% dadweynaha kenya da’doodu ka hooseyso 35 sano.
Raila Odinga wuxuu isagu ololihiisa doorashada ku fariisiyay gabi ahaan dagaalka musuqmaasuqa caadada u noqday dalka iyo wax-soosaarka beeraha ay isbeddelka cimilada adduunku wax yeeshay.
Goobaha kor u dhaafaya 40ka kun oo ay ku jiraan ilaa 100 xabsi oo laga codeyn doono waxaa ilaalinaya ciidan gaaraya 180,000, laakiin cabsida laga qabo wax is dabamarin iyo rabshado ayaa aad u sarreysa.
Kenya waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka fara ku-tiriska ah ee deggan Afrika, laakiin waxaa ka socota mid ka mid ah doorashooyinkii ugu adkaa waayadaan.
Ma jiro xal rasmi ah oo laga gaaray kala qaybsanaanta bulshada Kenya oo marar hore dilal fara badan ka dheceen, kuwaas oo an wali la haynin ciddii ka dambaysay, sida dilkii Chris Msando, kaas oo xiisadda sii adkeeyay.
Msando wuxuu ahaa Guddoomiyihii Guddiga Doorashada u qaabilsanaa qaybta Compiuter-ka oo ahayd arrin ku cusub doorashada sannadkaan, si looga hortago ku shubashada iyo xurgufaha dambe ee ka dhasha, oo horey u dhacay 2007 iyo 2012kii.